August 15, 2019 - khitalinmedia
August 15, 2019 Khitalin Media 0
မေတ္တာသုတ်ကို နားလည်ပြီးမှ ရွတ်ရတာ ပိုအကျိုးရှိမယ်ထင်လို့ပါ မေတ္တာသုတ် အကြောင်း… ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်း သိထားသင့်သောမေတ္တာသုတ် ၊ အဓိပ္ပါယ်နဲ့ ပွားများခြင်း အကျိုးကျေးဇူးများ နှင့်မေတ္တာသုတ်ကျင့်သူများ လိုက်နာရန် များကို တင်ပြ လိုက်ပါတယ်။ ၁။ယဿာနုဘာဝတော ယက္ခာ၊နေ၀ ဒေဿန္တိ ဘီသနံ။ယဥှိ စေ၀ါနုယုဉ္ဇန္တော၊ရတ္တိန္ဒိဝ မတန္ဒိတော။ မေတ္တသုတ်ပရိတ်တော်၏ တန်ခိုးရှိန်စော် […]
မနေ့ က ကျမဆေးခန်းကို ultrasoundကြည့်ဖို့ သားအမိနှစ်ယောက်လာပါတယ် …..သူတို့သားအမိဝင်လာတုန်းကတော့ ရင်သားတဖက်မရှိတဲ့ မိခင်ကို လှမ်းကြည့်ရင်း.လူနာလို့ ထင်မိတာပါ။ နောက်တော့မှ..ကျမသမီးလေးရာသီမလားတာ 3လလောက်ရှိပြီ…..ဗိုက်မှာလည်း အလုံးပေါ်နေလို့ ဆိုမှ ကလေးဗိုက်ကိုစပ်းသပ်ကြည့်လိုက်တော့..ဗိုက်ထဲမှာ ကိုယ်ဝန်က 5လပြည့်ခါနီးပါပြီ။ ကလေးရဲ့ အသက်ကိုသေချာသိချင်လို့ မွေးနေ့ မေးလိုက်မှ 13နှစ်နဲ့ တစ်လ….ဗိုက်ထဲက ကိုယ်ဝန်က […]
ဘုန်းဘုန်း အတွက် အသုံးတည့်မယ်ဆို တပည့်တော် တစ်ပြား တစ်ချပ်မှ မယူပါဘူး ဆိုတဲ့ အလှူရှင်
ဒီနေ့ ကျွန်တော် အပျော်ဆုံးနေ့လေး ဖြစ်မိတာကို မိတ်ဆွေတွေကို မျှဝေပါရစေ။ ကျွန်တော် ဒီ SURF ကား ၃ခ /၃၈၇၂ အပြာရောင်လေးကို ၂၀၁၁ ခု နှစ်ကတည်းမှ သိန်း ( ၉၀၀ ) ကျော်ပေးပြီး အမြတ်တနိုး စီးလာခဲ့တာ အခုချိန်ထိပါပဲ ဒီနေ့တော့ […]
မြောက်ပိုင်း မဟာမိတ်အဖွဲ့တိုက်ခိုက်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး တပ်မတော်သတင်းထုတ်ပြန်ပြီ
ပြင်ဦးလွင်မြို့နှင့် နောင်ချိုမြို့နယ်များ တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်များနှင့် ပတ်သက် ၍ တပ်မတော် က အောက်ပါအတိုင်း သတင်းထုတ်ပြန် သည်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့ရှိ တပ်မတော်နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ နောင်ချိုမြို့သို့အထွက် ပြင်ဦးလွင်တိုးဂိတ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း နောင်ချိုမြို့နယ်ရှိ ဂုတ်တွင်း ရဲစခန်း၊ ကျောက်မဲမြို့သို့အထွက် …… နောင်ချို […]
မိန်းက​လေးတစ်​​ယောက်​ခန္နာကိုယ်​ ​ကောက်​​ကြောင်းလှ​နေဖို့ထက်​မိမိရဲ့​ နောက်​​ကြောင်းရာဇဝင်​ လှ​နေဖို့ကပိုအ​ရေးကြီးတယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်​ အသားဖြူ ဖို့ထက်​ စိတ်​ထားဖြူ ဖို့က ပိုအ​ရေးကြီးတယ်။ မိန်းက​လေးတစ်​​ယောက်​ယောက်ျား​တွေ လည်​ပြန်​​ငေး​အောင်​လှ​နေဖို့ထက်​ ယောက်ျား​တွေတန်​ဖိုးထားလာ​အောင်​​ နေတတ်​ဖို့ပဲပိုအ​ရေးကြီးတယ်။ မိန်းက​လေးတစ်​​ယောက်​ချမ်းသာတဲ့​ယောက်ျားကို ရယူဖို့ကြိုးစား​နေတာထက်​ ကိုယ်​ကျင့်​တရား​ ကောင်းတဲ့​ ယောက်ျားကို ပိုင်​ဆိုင်​ခွင့်​ရဖို့ပဲ ကြိုးစားသင့်​တယ်။ မိန်းက​လေးတစ်​​ယောက်​ယောက်ျားတကာကို ဆွဲ​ဆောင်​ဖို့ပြင်​ဆင်​​နေတာထက်​ ​ယောက်ျား​တွေ​ လေးစားလာ​အောင်​​ […]
ဂုတ်တွင်းလမ်းမပေါ်တွင် ထောင်ပေါင်းများစွာသော ခရီးသည်ကားများနှင့်ကုန်တင်ယာဉ်များ ပိတ်ဆိုနေ
ဂုတ်တွင်းလမ်းမပေါ်တွင်ထောင်ပေါင်းများစွာသောခရီးသည်ကားများနှင့်ကုန်တင်ယာဉ်များပိတ်ဆို့နေပုံ…. ညမိုးချုပ်လာပြီဆိုရင်တော့ လုံခြုံရေးကိုပိုပြီးဂရုစိုက်ကြရတော့မယ်…..ညမိုးချုပ်လာပြီဆိုရင် ကားသမား၊ခရီးသည်၊ပြည်သူတွေအတွက် အန္တရယ်ရှိပါတယ်။ မိမိကိုယ်ကို သတိထားပြီးနေကြပါ…..ပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူတွေအန္တရယ်ရှိသည့်အတွက် share ပြီးမျှဝေပေးကြပါရန် တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်…။Credit: KO SiThu Maung ၁၅ ၈ ၂၀၁၉ ရက်နေ့ မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ် အဖွဲ့များ မြို့နှစ်မြို့ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်း…. မနေ့ညက မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့ အင်အား ၈၀၀ ကျော်စုဖွဲ့ပြီး […]
အနက်ရောင်ဝတ်ဆင်ထားသူနှစ်ဦး ကားဖြင့် လာရောက်ကာ စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကို RPG ဖြင့် ပစ်ခတ်ခြင်းဟုဆို
ပြင်ဦးလွင် တပ်မတော်နည်းပညာတက္ကသိုလ်နှင့် မြို့ရှောင်လမ်း စစ်ဆေးရေးဂိတ် လက်နက်ကြီးဖြင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး လူသေဆုံးမူရှိ ပြင်ဦးလွင်မြို့ တပ်မတော်နည်းပညာတက္ကသိုလ် (DSTA) ၀င်းအတွင်းနှင့် ပြင်ဦးလွင်မြို့ရှောင်လမ်း စစ်ဆေးရေးဂိတ်တို့တွင် ယနေ့(သြဂုတ်၁၅)နံနက် ငါးနာရီကျော်အချိန်က လက်နက်ကြီးဖြင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရမူ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လူသေဆုံး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမူ ရှိခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ နံနက်ငါးနာရီကျော်အချိန်က လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်သံ ကြားရခြင်းဖြစ်ပြီး […]
ကွတ်ခိုင်ကတပ်တွေ ဆင်းလာပါပြီ၊ မိတ္ထီလာကို ရဟတ်ယာဉ်တွေရောက်ပြီ
၁၅.၈.၁၉ ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲသတင်း ၁၀၃၀နာရီအချိန်။ ။TNLAတအောင်း၊SSAရှမ်း၊KIAကချင်ပူးပေါင်းထားတဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့က ခန့်မှန်း အင်အား ၃၅၀လောက်နဲ့နေရာစုံက ဖြန့်တိုက်နေတာပါ။ ကွတ်ခိုင်ကတပ်တွေဆင်းလာပါပြီ၊မိတ္ထီလာကို ရဟတ်ယာဉ်တွေရောက်ပြီ၊နာမည်ကြီး တပ်မ၉၉ကို အနီးဆုံးနေရာမှာချပေးမယ်ကြား ၊ရှမ်းတဲကတိုက်လေယာဉ်တွေတက်သွားပါပြီကြည်းတပ်နဲ့ လေတပ်ပေါင်းပြီး ဝိုင်းပတ်ချေမှုန်းတော့မှာပါ။ တံတားကင်း၊ရဲကင်း၊ပြည်သူ့စစ်ကင်းတွေကျကုန်ပါပြီ၊ နောင်ချိုတိုးဂိတ်ကဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ကားကြီးသမားအချို့ကို ဓားစာခံလုပ်ဖမ်းထားပါတယ်။ သံချပ်ကာတပ်တွေတက်မရအောင် သောင်းကျန်းသူတွေက ဂုတ်တွင်းတံတားမိုင်းခွဲလိုက်ကြောင်းကနဦးကြားသိရပြီးအခြေအနေသတင်းအတည်ပြုချက်ရဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ သီပေါနှင့်ကျောက်မဲကြားမှာနယ်မြေအခြေအနေစိုးရိမ်ရတဲ့အတွက်အဆင်းကားကြီးကားငယ်တွေကိုသီပေါဘော်ကြိုဘုရားအနီးမှာ၎င်း သီပေါတံတားအနီးမှာ၎င်းခေတ္တတားထားပါတယ်။ အခြေအနေမကောင်းသေး၍ကားကြီးကားလေးများယာဉ်ထိန်းနှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏စီစဉ်မှုအတိုင်းလိုက်နာသွားလာပေးကြဖို့လိုပါမယ်။ […]
ချစ်ပြီးရင် ဘယ်သောအခါမှ နောင်တမရမယ့် အမျိုးသား (၇) မျိုး
ကောင်းမွန်တဲ့ အချစ်နဲ့ မထိုက်တန်တဲ့ သူတွေရှိသလို ထိုက်တန်သူတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ သင်ချစ်ပြီးရင် သို့မဟုတ် တွဲပြီးရင် ဘယ်တော့မှ နောင်တမရမယ့် အမျိုးသား (၇) မျိုးရှိပါတယ်။ အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ် ရွေးဖို့ စဉ်းစားသင့်တဲ့ ယောကျာ်းမျိုးတွေလို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်နော် ၁။ အိမ်ပြန်လိုက်ပို့တဲ့သူ ဘယ်လောက် နောက်ကျနေတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်လောက် […]
သက် ငယ်မုဒိမ်းကျူးလွန် သူများကို ထောင်ဒဏ်တစ်သက် (ထောင်ထဲတွင် သေသည်အထိ နေရမည်)အထိ ချမှတ်နိုင်မည့် ရာဇသတ်ကြီးအား ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းကို အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်း ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်း မြင့်က လက်မှတ်ရေးထိုးအတည် ပြုသည်။ မတ်လ ၂၆ ရက် နိုင်ငံပိုင် ကြေးမုံသတင်းစာတွင် နိုင်ငံတော် သမ္မတက […]